Nataon’ny Fahitalavitra Rosiana ho toy ny Vaovao Tena Izy ny Lahatsary Kivazivazy ‘Coca-Cola Separatista’ · Global Voices teny Malagasy
Nataon'ny Fahitalavitra Rosiana ho toy ny Vaovao Tena Izy ny Lahatsary Kivazivazy ‘Coca-Cola Separatista’
Voadika ny 02 Oktobra 2016 10:27 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Deutsch, Magyar, Español, English
Mikhail Pashkov. Sary: YouTube
Niteraka resa-be tao amin'ny aterineto Rosiana ny lahatsary YouTube nolazaina ho natao tany Okraina. Hita ao amin'ny lahatsary, mijoro eo am-baravaran'ny fivarotana ny lehilahy iray, mihazona tavoahangy Coca-Cola izay heverina fa vao avy novidiny. Nahita izy fa voaravaka sarintanin'ny Okraina tsy misy an'i Crimea ny mariky ny tavoahangy. Natao pirinty ambonin'ilay sarintany ny teny hoe “Ho an'ny tena tia tanindrazana!”. Nanatona ilay mpivarotra ilay olona, nanotsakotsana ny tavoahangy ary nangataka fanazavana. Niezaka nanazava ilay mpivarotra fa tsy naharitra ny farany ka nanosika ilay lehilahy hivoaka ny amin'ny fivarotana.
Nalefa tao amin'ny tambajotra fahitalavitra Rosiana ny lahatsary, naseho ho porofon'ny fihenjanana ara-poko any Okraina. Nisy dikany izany raha toa ka tena izy. Saingy tsy izy—fa lahatsary vazivazy nataon'i Mikhail Pashkov mpanao hatsikana ao amin'ny aterineto Rosiana.
Ary indrindra, iray amin'ireo “Seho Fihantsiana” isan-karazany nataon'i Pashkov hita ao amin'ny YouTube ny “Coca-Cola Separatista” .
Tamin'ny fotoana nanoratana an'ity lahatsoratra ity, nahazo mpijery efa ho 820.000 ilay lahatsary tao amin'ny YouTube, anisan'izany ny fanehoan-kevitra an'arivony nozarain'ireo mpisera tao amin'ny aterineto faly tamin'ny vehivavy Okrainiana nanosika ny fahasorenan'ilay “tia tanindrazana” nitaraina ny fahaverezan'ny Crimea, ary noho izany niseho niandany tamin'ny fitambaran'ny saikanosy amin'ny Moskoa .
Nasiaka ny valinteny voalohany hany ka nandefa lahatsary iray hafa i Pashkov tokony ho tapa-bolana tatỳ aoriana sady nanazava fa vazivazy ny “Coca-Cola separatista” ka nibedy ireo mpijery noho ny fanehoan-kevitra feno fankahalana tao amin'ny YouTube izy.
Sarotra ny mahalala raha tso-po eto i Pashkov, rehefa hita fa toa tena niniana natao mihitsy hahatonga izao fanehoan-kevitra izao ny vazivaziny tamin'ny 1 Aprily. Araka ny hita tao amin'ny pejiny Vkontakte, ankoatra izany, dia niantsafa tamin'i Graham Phillips, Britanika bilaogeran-dahatsary nalaza tamin'ny fitsikerana ny governemanta Okrainiana sy ny fiarovana ny separatsista tohanan'ny Rosiana vao haingana ihany koa i Pashkov .
Ho fanaporofoana fa namboarina ilay lahatsary, dia nampiseho ny fomba namoronana ny marika Coke sandoka i Pashkov ka namokatra lahatsary iray hafa izay mitovy tamin'ilay tao amin'ny fivarotana izy.
Vitsy ny olona no nahita ity lahatsary faharoa ity izay tsy nahasarika afatsy mpijery 5.500 monja.
Avy eo, volana vitsivitsy tatỳ aoriana, nisy fandaharana tafatafa tao amin'ny Pervyi Kanal—tambajotra fahitalavitra Rosiana—nampiasa ny ampahany tamin'ny lahatsary momba ny toe-draharaha ara-politika ao Okraina, namoaka ny lahatsary ho toy ny hoe tena izy. Nilaza ny mpanolotra ny fandaharana Artem Sheinin rehefa avy nampiseho ny lahatsary fa “tena nahafinaritra” ilay izy, ary nidera ilay vehivavy tao amin'ny lahatsary (izay mpilalao sarimihetsika no tena marina), sady nilaza fa mampiseho an'i Okraina tena izy ilay vehivavy.
Nitsikanikany tamin'ity fifampifangaroana ity, nandefa ny ampahan'ny lahatsary avy amin'ny Pervyi Kanal tao amin'ny fantsona YouTube-ny i Pashkov. Tsy ela anefa, nilaza izy fa tratran'ny “dona” avy amin'ny Google, noho ny fitarainana momba ny zon'ny mpamorona avy ao amin'ny Pervyi Kanal, izay hita fa noho ny fahavitany namono ny fahafahana mahazo vola ny lahatsary sy nampihena ny halavan'ny lahatsary azony zaraina. Izany no mihatra amin'ireo mpisera lehibe maro, izay mitarika olana amin'ny fampiharana hentitra loatra ny politikan'ny zon'ny mpamorona ao amin'ny YouTube .
Nilaza i Pashkov fa niezaka nampakatra ny raharaha mikasika ilay fanapahan-kevitra ary nilaza fa nampiasa tsotra fotsiny ny votoaty izay nalain'ny Pervyi Kanal taminy izay tsy nahazoana alalana avy aminy akory izy nefa voalaza fa niandany tamin'ny fahitalavitra Rosiana ny Google ary tsy nety nanome fanazavana antsipiriany momba ny fanapahan-keviny.
Tamin'ny herinandro lasa, nizara votoaty bebe kokoa tao amin'ny tambajotra sosialy Vkontakte i Pashkov, izay antsasaky ny maro amin'ny mpanjohy azy ny mpanjohy ny fantsony ao. Mavitrika ihany koa izy ao amin'ny aterineto Rosiana fanaovana dinika Pikabu, izay ahitana azy tia mizara ao ny ” famakiana bantsilana ” ny rafitra ara-pitsarana momba ny mpitety ao Rosia .
Mandritra izany fotoana izany, mbola voatahiry ao amin'ny tranonkalan'ny Pervyi Kanal ny fandaharana tao amin'ny fahitalavitra izay nalefa tamin'ny 21 Septambra ary mbola azon'ny rehetra jerena. Tsy misy filazana tao amin'ny tranonkalan'ny fantsona fa vazivazy iray natao tamin'ny 1 Aprily ny lahatsary.
4 andro izayKanadà
Te hianatra hanozona toy ny Rosiana? Misy kaonty Instagram natokana ho an'izany.
5 andro izayAlbania
Miatrika ny vanim-potoanan'ny fizahantany tsy mahazatra ny torapasika fitsangatsanganana any Albania
4 herinandro izayRepoblika Tseky
2020, nakaton'i Arzantina tamin'ny latsabato manan-tantara naneken'ireo Loholona ny fanalànjaza.